DFP TAO TOAMASINA : Manao fikafika maloto tsy hifantohan’ny vahoaka amin’ny fifidianana ny mpitondra
Mitohy ny fitetezam-paritra ataon’ny filoha nasionalin’ny Dfp, Ratolo- janahary Maharavo ( Doudou) sy ireo mpiara-miasa aminy. 21 décembre 2017
Ny antoandron’ny alarobia 20 desambra, nisy ny fihaonana nataon’ny Dfp nasionaly tamin’ireo mpikambana ao anatin’ny fiarahamonim-pirenena sy mpanao politika ao Toamasina. Fihaonana izay natao tao amin’ny Restaurant L’Univers. Fampitam-baovao no antom- pihaonana. Fampitam-baovao ny amin’ny hetsika fanabeazana olom-pirenena momba ny fifidianana ataon’ny Dfp manomboka ny volana janoary 2018.
Nandritra ny fandraisam-pitenenana, dia nanambara ny filoha nasionalin’ ny Dfp fa tsy azo ihodivirana intsony ny fifidianana ny taona 2018 ka mila miomana amin’izany ny vahoaka malagasy. Na dia nilaza ho tsy mpanohitra ny fitondrana kosa ny Dfp nandritra izao famoriana raiamandreny mpikambana ao anatin’ny fiarahamonim-pirenena tao Toamasina izao, dia tsy niova amin’ny fomba fiteny mivantambantana i Doudou. Nilaza izy fa miezaka manao fikafika maloto mba hahatonga ny vahoaka tsy hifantoka amin’ny fifidianana izao fitondrana Hvm izao. Foronin’ny mersenera Hvm izao resaka rehetra izao toy ny hoe tsy hisy fifidianana izany eto ny taona 2018 fa tetezamita aloha vao fifidianana.
Resaka foronina mba hampandriana adrisa ny vahoaka tsy hifantoka amin’ny fifidianana avokoa izany rehetra izany.
Izany no nahatonga ny Dfp manao fitetezam-paritra manentana ny fiarahamonim-pirenena manerana ny Nosy mba hifanome tanana amin’ny Dfp amin’ny fanabeazana ny olom-pirenena momba ny tontolon’ny fifidianana, hoy hatrany ny fanazavan-dRatolojanahary Maharavo filoha nasionaly. Nilaza ho tsy mbola manana ny hoenti-manana amin’izany kosa anefa ny Dfp fa mbola hanatona an’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena hanampy azy ireo.
Teboka efatra no hanabeazana ny olom-pirenena momba ny fifidianana. Ny voalohany, dia ny mahakasika ny lisitry ny mpifidy. Mila mahafantatra ny maha zava-dehibe ny fanoratana anarana ao anatin’ny lisi-pifidianana ny vahoaka. Ohatra amin’izany, raha tsy voasoratra anatin’ny lisi-pifidianana ny olona iray dia tsy afaka mitory kandidà na dia tsy manara-dalàna aza ilay kandidà. Teboka faharoa ny momba ny biraom-pifidianana. Mila fantatry ny vahoaka ny momba azy io mba hialana amin’ny hala-bato amin’ny alalan’ny famoronana an-taratasy biraom-pifidianana tsy misy akory.
Fahatelo, dia ny manodidina ny fampielezan-kevitra. Nalaina ho ohatra ireo tompon’andraikitra tsy tokony mahazo manao fampielezan-kevitra.
Ny tsy tokony hampiasana fitaovam- panjakana mandritra ny fampielezan- kevitra. Mila fantatry ny vahoaka ireo lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra mba hahafahany misoroka mialoha sy mitory ireo tsy fanarahan-dalàna. Teboka fahaefatra, dia ny andron’ny fifidianana mihitsy. Mila fantatry ny vahoaka ny azo atao sy ny tsy azo atao. Mila fantatry ny vahoaka ny momba ny fanisam-bato mba hahafahany miaro ny safidiny. Hampahafantarina ny vahoaka ny fomba atao hiarovana ny safidiny. Nahaliana ireo mpikambana ao anatin’ny fiarahamonim-pirenena sy mpanao politika tao Toamasina ny famelabelaran-kevitra nentin’ny filoha nasionalin’ny Dfp, Ratolojanahary Maharavo.
Nandritra ny fanazavana nataony tamin’ny mpanao gazety no nilazany fa nisy fiovàna ny fanalavana ny atao hoe Dfp taorian’ny fanavaozana ny sata mifehy azy. Raha dinika ho an’ny Fanavotam-pirenena izany teo aloha, dia lasa Dingana ho Fampandrosoam-Pirenena kosa ankehitriny.
Momba ny ho firotsahana na tsia amin’ny fifidianana 2018 kosa, dia nanambara Ratolojanahary Maharavo fa ao anatin’ny fitadiavana kandidà ny Dfp amin’izao fotoana izao. Kandidà tena afaka mitondra fanovàna eto amin’ny firenena no tadiavinay, hoy hatrany ny fanehoan-kevitr’i Doudou.